ဆုံးဖြတ်ချက် ကောင်းတစ်ခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာချတတ်စေဖို့ အဓိက လျှို့ဝှက်ချက်(၄)ခု - For her Myanmar
ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ခိုင်မာသွားစေဖို့
ယောင်းတို့ရေ… လုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်တိုးတက်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ကောင်းကောင်းချတတ်တာကလည်း အဓိကသော့ချက်အနေနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်… ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာကလည်း အပြောသာလွယ်ပေမဲ့ လက်တွေ့မှာမလွယ်ကူလှတာ ယောင်းတို့လည်း အသိ ဖြစ်မှာပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှု အနေအထား ကွာဟသွားနိုင်တာမို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းကောင်း ဘယ်လိုချမှတ်သင့်လဲဆိုတာကို ယောင်းတို့ ဗဟုသုတရအောင် ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်နော်…
ကြီးမားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မနက်ပိုင်းမှာ ချသင့်ပါတယ်။
ယောင်းတို့ရေ… ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်အနားယူပြီး နိုးထလာတဲ့ မနက်ခင်းအချိန်တွေမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသင့်ပါတယ်နော်… ဒီလိုအချိန်မှာ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေ ၊ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ ကင်းစင်ပြီး စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းနေတာမို့ သေချာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီး ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ယောင်းတို့ရေ… ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ၊ ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေ ရနိုင်မလဲဆိုတာကို အဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ အကျိူးအမြတ်မရှိရင်တောင် လုပ်ငန်းအတွက်ရေရှည်မှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်မလဲဆိုတာ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတစ်ခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ချသင့်ပါတယ်နော်။
ယောင်းတို့ရေ. ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို တတ်နိုင်သလောက် စုဆောင်းပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ သေချာတဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေ သေချာခိုင်မာတာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ချသင့်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်။
ယောင်းတို့အနေနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အသစ်ချတော့မယ်ဆိုရင် ပြီးခဲ့တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရဲ့ အကောင်းအဆိုး ၊ အကျိုးအကြောင်းကို ပြန်လည်သင်ခန်းစာယူပြီး ပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတဆင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းကို ချသင့်ပါတယ်နော်။
Related Article >>> အင်တာဗျူးဖြေအပြီးမှာ အလုပ်ရှင်ကို မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းကြီး (၅) ခု
ကဲ… ယောင်းတို့ရေ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကောင်းတွေကို ဘယ်လိုချသင့်လဲဆိုတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို တီးခေါက်မိသွားလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ယောင်းတို့ဗဟုသုတရစေမယ့် အကြောင်းတွေကို For Her Myanmar ကနေ ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့ စောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးလို့…
References: Success, Fast Company
ဇဝဇေဝါဖွဈနတေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ခိုငျမာသှားစဖေို့
ယောငျးတို့ရေ… လုပျငနျးတဈခု အောငျမွငျတိုးတကျစတေဲ့ အကွောငျးအရငျးတှထေဲမှာ ဆုံးဖွတျခကျြ ကောငျးကောငျးခတြတျတာကလညျး အဓိကသော့ခကျြအနနေဲ့ ပါဝငျနပေါတယျ… ဆုံးဖွတျတယျဆိုတာကလညျး အပွောသာလှယျပမေဲ့ လကျတှမှေ့ာမလှယျကူလှတာ ယောငျးတို့လညျး အသိ ဖွဈမှာပါ။ ဆုံးဖွတျခကျြပျေါမူတညျပွီး လုပျငနျးအောငျမွငျမှု အနအေထား ကှာဟသှားနိုငျတာမို့ ဆုံးဖွတျခကျြကောငျးကောငျး ဘယျလိုခမြှတျသငျ့လဲဆိုတာကို ယောငျးတို့ ဗဟုသုတရအောငျ ဝမြှေပေးခငျြပါတယျနျော…
ကွီးမားတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို မနကျပိုငျးမှာ ခသြငျ့ပါတယျ။
ယောငျးတို့ရေ… ကောငျးမှနျစှာ အိပျစကျအနားယူပွီး နိုးထလာတဲ့ မနကျခငျးအခြိနျတှမှော ဆုံးဖွတျခကျြခသြငျ့ပါတယျနျော… ဒီလိုအခြိနျမှာ စိတျရှုပျထှေးမှုတှေ ၊ မောပနျးနှမျးနယျမှုတှေ ကငျးစငျပွီး စိတျကွညျလငျလနျးဆနျးနတောမို့ သခြောတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကောငျးကို ရရှိနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> ကိုယျ့ရဲ့ career မှာ ပြျောရှငျဖို့အတှကျ လကျလှတျလိုကျသငျ့တဲ့ ယုံကွညျမှု ၃ခု
အကွောငျးအရာပျေါမူတညျပွီး ခနျ့မှနျးတှကျခကျြမှုတှေ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။
ယောငျးတို့ရေ… ဆုံးဖွတျခကျြခတြဲ့အခါမှာ ဆုံးဖွတျခကျြနဲ့ ဆကျနှယျပွီး ဘယျလိုဆိုးကြိုးတှေ၊ ဘယျလိုအကြိုးအမွတျတှေ ရနိုငျမလဲဆိုတာကို အဓိကထညျ့သှငျးစဉျးစားသငျ့ပါတယျ။ အကြိူးအမွတျမရှိရငျတောငျ လုပျငနျးအတှကျရရှေညျမှာ ဘယျလိုသကျရောကျမှုတှရှေိနိုငျမလဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးတှကျခကျြပွီးမှ ဆုံးဖွတျခကျြကောငျးတဈခုကို ခိုငျခိုငျမာမာ ခသြငျ့ပါတယျနျော။
ယောငျးတို့ရေ. ဆုံးဖွတျခကျြတဈခု ခဖြို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို တတျနိုငျသလောကျ စုဆောငျးပွီး တဈခြိနျတညျးမှာပဲ သခြောတဲ့ ဝဖေနျပိုငျးခွားမှုတှေ ပွုလုပျသငျ့ပါတယျ။ အခကျြအလကျတှေ သခြောခိုငျမာတာနဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ခသြငျ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ပွနျလညျသုံးသပျသငျ့တယျ။
ယောငျးတို့အနနေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြအသဈခတြော့မယျဆိုရငျ ပွီးခဲ့တဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှရေဲ့ အကောငျးအဆိုး ၊ အကြိုးအကွောငျးကို ပွနျလညျသငျခနျးစာယူပွီး ပွီးခဲ့တဲ့အတှအေ့ကွုံတှကေတဆငျ့ ဆုံးဖွတျခကျြကောငျးကို ခသြငျ့ပါတယျနျော။
Related Article >>> အငျတာဗြူးဖွအေပွီးမှာ အလုပျရှငျကို မေးသငျ့တဲ့မေးခှနျးကွီး (၅) ခု
ကဲ… ယောငျးတို့ရေ ဒီလောကျဆိုရငျတော့ ဆုံးဖွတျခကျြကောငျးတှကေို ဘယျလိုခသြငျ့လဲဆိုတဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှကေို တီးခေါကျမိသှားလောကျပွီထငျပါတယျ။ နောကျထပျလညျး ယောငျးတို့ဗဟုသုတရစမေယျ့ အကွောငျးတှကေို For Her Myanmar ကနေ ဆကျလကျတငျဆကျပေးဦးမှာမို့ စောငျ့မြှျောပေးကွပါဦးလို့…
Tags: benifits, Career, evaluate, good decision, Morning, Secret